Unenkinga Ukubloga? Hlela ngokufanele. | Martech Zone
Njenge-blogger yomuntu siqu neyobungcweti, nginenkinga yokukhipha iposi lebhulogi nsuku zonke ngenxa yomthwalo wami womsebenzi nezinye izingqinamba zesikhathi. Kepha uma ufuna ukuphumelela njenge-blogger, noma ngabe kungokwakho noma ngokomsebenzi, kufanele uhlanganise izinto ezintathu: ukufika ngesikhathi, ukuhambisana. Ukufaka zonke zalezi zinto, kubalulekile ukuthi ube nohlelo. Nawa amathiphu we-3 asheshayo wokukusiza ukuthi ubhuloge kahle kakhulu:
1. Dala isheduli yokuqukethwe.
Nquma ukuthi iziphi izinsuku ofuna ukuzithumela kubhulogi yakho bese uqhubeka nokukhiqiza okuqukethwe ngalezi zinsuku. Lapho abafundi bazi ukuthi bangakulindela nini okuqukethwe, bazokwazi ukufunda okuthunyelwe kwakho ngalezo zinsuku. Futhi, zama ukuthumela okungenani kathathu phakathi nesonto. Igcina ibhizinisi lakho liphezulu engqondweni, futhi lisiza nge-SEO, ukumaketha kanye nokuthuthukiswa komkhiqizo.
2. Dala uhlelo lokuqukethwe.
Isikhathi esiningi, inkinga izama ukuthola ukuthi ufuna ukubloga ngani. Bheka ikhalenda lakho - uma uzoya emcimbini ofanele kungekudala, hlela ukubhala ngawo ngosuku olulandelayo. Ukuba nohlelo lokuthi uzobhala ngani kwenza kube lula kuwe ukuqedela umsebenzi wakho wokubhuloga walolo suku.
3. Isikhathi sibalulekile.
Bhala ngezinto ezifika ngesikhathi futhi uphromothe okuthunyelwe kwakho ngesikhathi esifanele. Uma ubhala ngesihloko esishisayo, qiniseka ukuthi wabelana lapho kunenzuzo enkulu kusuka kumbono we-SEO nombono wokumaketha.
Ukuzinika isikhathi sokuhlelela ibhulogi yakho ngenyanga ezayo noma ngeviki elizayo kuzokongela isikhathi ngokuhamba kwesikhathi. Kepha ungakhohlwa ukwenza lula lapho kudingeka!
Tags: ibhulogiukubhuloga ezinkampaniplanUkuhlelaKubhala
Izinhlelo zokusebenza zeWebtrends Zithuthukiselwa kuWebtrends Social